warkii.com » Jurgen Klopp Oo Saadaaliyey LABADA Kooxood Ee Midkood Ku Guuleysan Doonto Champions League
Jurgen Klopp Oo Saadaaliyey LABADA Kooxood Ee Midkood Ku Guuleysan Doonto Champions League
Bayern Munich iyo Manchester City ayaa ah labada kooxood ee ugu cadcad ee ay u badan tahay in midkood ku guuleysto tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan, sidaa waxa rumaysan tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp.
Labada kooxoodba waxay wareeggii 16ka kulamadiisii hore soo bandhigeen awood ay ku muquuniyeen kooxihii ay la ciyaareen oo ay waliba marti u ahaayeen oo ahaa Real Madrid iyo Chelsea.
Manchester City waxay 2-1 ku garaacday Real Madrid oo ay ugu tagtay Santiago Bernabeu, halka Bayern Munich ay Stamford Bridge dhex jiid-jiiday Chelsea oo ay ugu dhiibtay 3-0.
Tartanka Champions League oo dib loo bilaabayo bisha August ayaa loo qaabeeyey nidaam cusub oo horyaal yar oo muddo kooban lagu soo afjarayo, laakiin ciyaaraha ka hadhsan wareegga 16ka ayaa sidoodii hore u dhici doona.
Liverpool oo koobka Champions League ku guuleysatay xili ciyaareedkii hore ayaa ku fashilantay inay difaacato, waxaana tartanka ka saartay Atletico Madrid oo celceliska labadii ciyaarood kaga dul-tallaabsatay 4-2.
Laakiin Jurgen Klopp ayaa hadda saadaaliyey labada kooxood ee ugu cadcad hanashada Champions League, waxaanu yidhi: “Aniga waxay ila tahay inay ugu cadcad yihiin Bayern Munich iyo Man City.”
Klopp oo ka hadlayay ka hor ciyaarta maanta ee Aston Villa waxa uu intaa ku daray: “Bayern xili ciyaareed wanaagsan ayay ku qaadatay Jarmalka. Intii uu shaqada la wareegay Hansi Flick, wax layaab leh ayay qabteen. Labadan kooxood ayaa ah kuwa ugu cadcad. Ma garanayo dhab ahaan sida ay u dhici doonto, waxaanaynu eegi doonaa semi-finalka.”